September 04, 2016 – Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax balaaran oo looga soo horjeeday Shirka Maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe oo lagu wado inuu ka furmo magaalada Jowhar.
Banaanbaxani ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal qof oo isugu jira odoyaasha dhaqanka, Dhalinyaro, Haween iyo caruur iyagoo isugu soo baxay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxana ayna banaanbaxayaashu kasoo horjeedeen Shirka maamulka loogu dhisayo Maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee lagu wado inuu ka furmo Jowhar.
Dadka banaan baxa dhigayay ayaa watay boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ay uga soo horjeedeen shirka uu hogaanka ka yahay Urur Goboleedka IGAD oo maamulka loogu sameenayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe.
Qaar kamid ah waxgaradkii ka hadlay banaanbaxa ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan shirka ka furmaya Jowhar, waxa ayna cadeeyeen in shacabka Hiiraan aysan diyaar u aheyn inay wax ku darsadaan Shabeelaha Dhaxe, waxa ayna ku hanjabeen inay xariirka u jarayaan Dowlada Federaalka.
Shirkan ayaa lagu wedey shalay oo sabti ahayd inuu ka furmo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, laakiin waxaa diiday inay ka soo xaadiraan oday dhaqameedyada Baledweyne.
September 4, 2016 tuugahaladilo2015